Ogaden News Agency (ONA) – Waxay cadeeyeen dhaqaatiirta in Meles xanuunkiisa uu soo dadajiyey naxadintii ka raacday SA iyo USA
Waxay cadeeyeen dhaqaatiirta in Meles xanuunkiisa uu soo dadajiyey naxadintii ka raacday SA iyo USA
Posted by ONA Admin	/ July 23, 2012
Waxaa dadka siyaasada indha-indheeya qaarkood sheegayaan in KT Meles uu in muddo ahba xanuunsanayey, Waxaanse shaki ku jirin in KT Meles Zenawi aad u liito haduuna dhimaninba. KT Meles wuxuu ka soo annbabaxay Addis Ababa 15ka bishii 5aad isaga oo caafimaad ahaan taam ah wuxuuna u soo kicitamay dalka America oo uu shirkii G8-ku ka dhacayay, isla 18kii bishii 5aad waxaa dhacay shirkii looga hadlayay cunnada aduunka shirkaas oo ka dhacay Reg building. Waana shirkii lagu canbaareeyay, looguna sheegay Meles inuu dhiig yacab yahay, shacabka Itobiyana uu baahan yihiin xoriyad iyo dimoqraadiyad. Waxaa ku dhawaaqay hadaladaa suxufiga caanka ah ee Abeba Galew oo dhalasho ahaan ka soo jeeda qawmiyadda Amhara. Waxana caan noqotay ereyadii uu ku dhawaaqayay ee ahaa; “we need freedom more than food”
Waxaa KT Meles uu kala kulmay socdaalkaa argagax iyo waji gabax aad u saameeyay jidhkiisa taas oo aad ka dareemi kartay wakhtigii uu Abeba Galew hadlayay in uu Zenawi wijigiisa iyo jidhkiisaba is badalay, oo uu sida jir-jiroolaha midab kale yeeshay.
Halkan hoose ka daawo muuqalka qosolka lehe ee mucjisada sanadka gumaysiga soogaadhay;
Middaa loogama hadhine isla maalintii labaad waxaa G8 soo buuxdhaafiyay mudaharaadayaal aad u tiro badan oo isugu jiray caddaan iyo madawba waxaana lagu mudaharaadayay isaga kaligii wixii madax meesha socotay taasoo ceeb labaad ku noqotay. Halkan ka daawo muuqal aad uqiimo badan oo maalinkaa ah;
Zenawi isaga oo aan biyo USA ka cabbin ayuu u kicitamay dalka South Afirca halkaas oo lagu sii sugayay in dhiigya cabka in lagu mudaharaado, halkaasna waxaan ogayn wixii meeshaas ka dhacay oo xaataa dantii uu kalahaa inuu gudan waayo ayay noqotay oo jaamacada inuu ka soo jeediyo khudbadii loogu talagalay wuu awoodi waayay mudaharaad iyo rabshado awgeed.
Waxaa xasuus mudneed maalinkuu imaaday SA ayaa waxa hotel loogu keenay madax weynaha Somaliya Sheikh Shariif oo u imaaday shirka African day. Dhalinyaro rabtay in ay booqdaan Sh. Shariif ayaa galay qeebtii meles ku jiray, hal mar ayuu booday isagoo argagaxsan. Ka dib police kii ayaa dhalinyaradii u sheegay in nin maskaxada ka xanuun sanayo meesha ku jiro kaasoo ahaa Meles Zanawi. Waxaa ka mid ahaa hadaladii police-ka; wuxuu iska feedhayaa madaxa wuxuna diiday in loo soo galo xataa looma geeyo cabitaan ama shah.
Halkan kadaawo mudahardkii SA
Kadib KT Meles 4 maalmood oo lagu mudaharaadayay kadib wuxuu u kicitamay meeshii uu ka soo safray Ethiopia, Waxaa hubaal ah inuusan kor u kicin xanuunkii uu qaaday dartii, lakin wuxuu soo gaadhay G20 oo ka dhacay Mexico city isaga oo aad u tabar daran sawiradiisana aad ka dareemaysay caddaanka ka muuqda, waxayna ilo xogogaal ah sheegayeen in uu Mexico aad ugu xanuunsaday.
Isku soo duuboo KT Meles waxaa la odhan karaa waxaa sabab u ahaa xanuunkiisa safarkii uu USA iyo South Africa ku soo maray taasoo soo dadajiyey inuu la dhoco xanuunkii dilaaga ahaa ee hayey oo daaweynta ay ku socotay.
Indhaha Iyo Dhagaha Shacabka Itoobiya ayaa ku wajahan Xaaladda Zenawi. Mana jiraan wax cad oo illaa iyo hadda laga hayo xaaladiisa, balse wararka is khilaafsan ee ka soo baxaya Itoobiya ayaa sheegaya in Zenawi uu dhintay marna sheegaya Inuu nool yahay. Muddo 12 Bari dhexdood ah ayaa xaalku soo kala cadaan.